» रूपचन्द्र विष्टः व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक
रूपचन्द्र विष्टः व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक
१२ असार २०७६, बिहीबार ०६:३६
खासमा २०२० देखि २०३७ सालसम्म नै उहाँको जनमुखी अभ्यास काल थियो । यही अवधिमा नै उहाँमा ज्ञानको भण्डार भएको र दर्शन क्षेत्रमा पनि ठूलो उपलब्धि भएको हो । यही ज्ञान र अनुभूतिलाई थाहा दर्शनका रूपमा २०३८ सालको दोसं्रो आमनिर्वाचनदेखि २०५६ सालसम्म सम्प्रेषण गर्नुभयो । यसैका आधारमा यो अवधिलाई उहाँको विचार सम्प्रेषण काल मान्न सकिन्छ । जुन कुरा उहाँले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापस) पदमा बसेर आफ्नो विचार दिइरहुनभयो । त्यसका लागि रापस पदसाधन मात्र भएको थियो । मकवानपुरबाट थालिएको यो थाहा आन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्था र राजतन्त्र समाप्त पार्न ठूलो बल मिलेको थियो । हालका कम्युनिस्ट पार्टी गठन र विस्तारमा पनि यही जग नै पर्याप्त बनेको थियो ।
उहाँको वलिष्ठ शरीर, गहिरो अध्ययन, अपार ज्ञान भण्डारका कारण अदम्य साहस पनि थियो । शासकहरू उहाँदेखि सधैं आतंकित हुन्थे । रापस (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) हुँदा जेल हालियो । राजाका दूत जेलमा गएर भने ‘जीवन जेलमा नै बिताउने कि महाराजले दिएको सबै मन्त्रालय हेर्नेगरी मन्त्री बन्ने वा प्रधानमन्त्री ? वा रोजेको मन्त्री ?’ रूपचन्द्रले ती दूतलाई लेखेर दिनुभयो, ‘तिम्रा यस्ता बेठीक व्यवस्थामा हामीजस्तालाई मन्त्री पदमा पाइँदैन । मेरो ज्यान बाहिरभन्दा यही जेलमा राख्न उपयुक्त छ ।
किनकि, यहाँ मारिँदा त दोष अरूलाई लगाउन मिल्दैन होला नि मरिच !’ त्यसबेला मरिचमान प्रधानमन्त्री थिए । ती दूत रुदानेको सोही व्यहोराको पत्र बोकेर राजा कहाँ गएका थिए । ती दूत थिए वीरेन्द्रकेशरी पोखरेल । अर्का दूत मरिचमान आफैं थिए । अब रूपचन्द्रले रापसको हैसियतमा गरेका साहसिक वैधानिक विद्रोहहरूबारे केही चर्चा गरौं ।
यसभित्र ठूलै सैद्धान्तिक, दार्शनिक र राजनीतिक कुरा छन् ।
के कुनै मान्छे जन्मेको कारण समाज र मानव जातिलाई कति सकारात्मक प्रभाव प¥यो ? त्यसअनुसार पो उत्सव मनाउने हो । नकारात्मक प्रभाव परे त शोक पो मनाउनुपर्ने हो नि । तर, दुष्ट मनुष्यले पनि उत्सव मनाउने अनि अरूले हो÷हो गर्ने काम किन प्रचलन भयो ? यो प्रश्नको उत्तर अहिलेका जन्मोत्सव मनाउन केक काटेर प्रचार गर्नेले दिन सक्छन् ? केक काटेर उत्सव मनाउने चलन कहाँबाट किन आयो ? वर्तमान बुज्रुगले बलपूर्वक व्याख्या गर्न खोज्लान्, तर औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन् । निरंकुश राजतन्त्रमा चलेको कालोे व्यवस्थामा त्यसका नायकलाई रुदानेले दिएको उत्तर तत्कालीन शासकलाई कडा चुनौती नै थियो । तर, आजको परिवर्तित समयमा पनि यो बेथिति घटाउन सकिएन ।
तर बेलायतमा भनिन्छ किन ? सामान्य जवाफ छ । त्यहाँ राजतन्त्र छ । तर, नेपालमा किन यस्तो भनिन्छ ? नेपालमा राजतन्त्र थियो । बेलायतको जस्तै प्रिभी काउन्सिल सट्टामा राजपरिषद वा राजसभा थियो । तिनका सदस्यलाई सम्माननीय भन्ने प्रचलन राजाले बेलायतलाई हेरेर गरेका थिए । त्यसैले रुदानेले सदनमा कहिल्यै सम्माननीय शब्द प्रयोग गर्ने काम गर्नुभएन । एकपटक यस विषयमा पनि रुदानेले अध्यक्षलाई सम्माननीय भनी सम्बोधन नभएको कुरामा नियमापत्ति भयो । रुदानेले आफैंले अध्यक्षसँग तत्काल समय माग्नुभयो र भन्नुभयो ‘माननीय अध्यक्ष महोदय ! यो सदनभित्र कोही पनि सम्माननीय छैनन् । सबै माननीयको हैसियतमा उपस्थित छौं । यदि कसैलाई संम्माननीय चाहिएको हो भने राजसभातिर खोज्न जानुपर्छ कि ? यस कुरालाई लोकेन्द्रवहादुर चन्दसहितका माननीयहरूले टेबुल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।
त्यसैले अहिलेका दल र नेताले तलको भनाइलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘थाहासँग प्रेम गर, थाहा तिमीकहाँ आउँदै छ । थाहाप्रति इमान राख, कर्तव्य तिमीकहाँ आउँदछ, कर्तव्य हो जिन्दगीको सक्कल ।’ यही कुरामा ध्यान जाओस् र रुदानेलाई सम्झना राज्य तहबाटै गरियोस् । यो देश सप्रिए वा बिग्रिए दोष अहिलेको नेतृत्वलाई जान्छ । यो कुरा रुदानेले २०२९ सालमा अञ्चलाधीशसँग वयान दिँदा राजालाई लक्षित गरी भन्नुभएको थियो । ‘जो जति शक्तिमा छ, समाज सप्रे÷बिग्रे, त्यो त्यति जिम्मेवार छ ।’ यो कुरा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागू हुन्छ । जनताका असली सेवक रुदानेको २०औं स्मृति दिवस मनाइरहँदा हामी सबैले यो कुरा हृदयबाटै मनन गरौं ।